Ithegi: formstack | Martech Zone
Ukuba kukho inkampani enye kwi-Intanethi ethi ibeke esweni kwaye ilinganise amaxabiso okuguqula kuwo nawuphi na umahluko, ngabantu baseFormstack! Siye saba ngabahlobo, abalandeli, kunye nabaxhasi beqela iminyaka, kwaye ayikhathazi ukuba balapha e-Indianapolis! Le datha intsha kunye ne-infographic ukusuka kumanqaku eFormstack ukuya kwimiba emi-5 enokuthi ibenzakalise kakhulu amaqondo akho okuguqula: Ubhaliso lweMidiya yezeNtlalontle-yenza ngcono kunendlela yokubhalisa engenanto. Ngapha koko, 87%
Wagqibela nini ama-Amazon ukukubuza ukuba ungubani? Mhlawumbi xa ubhalisela iakhawunti yakho yeAmazon okokuqala, akunjalo? Kwakukudala kangakanani oko? Yile nto ndiyicingileyo! Ngokukhawuleza xa usayina kwiakhawunti yakho yeAmazon (okanye undwendwele indawo yabo kuphela ukuba ungene ngemvume), ikubulisa kwangoko kwikona yasekunene. Ayikubulisi iAmazon kuphela, kodwa ikubonisa kwangoko izinto ezifanelekileyo: iingcebiso ngemveliso esekwe kwi
Abantu abakhulu eFormstack bavavanye amashishini amancinci angama-200 amancinci naphakathi e-US kunye nezo ezingenzi nzuzo zokuchonga apho abathengisi bahamba khona ngokuchanekileyo nangokungalunganga ngezicwangciso zabo zokukhokela. Le infographic kukubonela kugcino olupheleleyo lwe-State of Lead Capture kwi-2016 ingxelo enolwazi oluphambili ngakumbi kwimiceli mngeni yokubamba kunye nezicwangciso. Ukufumanisa kwabo okokuqala, ukuba ukuthengisa kufuna ukuqonda kwintengiso esondeleyo, kungaphaya kokubaluleka. Okubangela umdla ngokwaneleyo kukuba, iinkampani ezininzi zithengisa umgama kwintengiso